Digital X-Ray - Medical Aid International
Ny toeram-pitsaboana lehibe rehetra dia mila X-Ray azo itokisana. Na izany aza, any amin’ny tontolo iainana ambany dia ambany ny ankamaroan’ny toeram-pitsaboana sy hopitaly dia misedra fanamby maro amin’ity faritra ity izay mety hisy fiatraikany mivantana amin’ny kalitaon’ny fikarakarana omena.
IREO VAROTRA MASINA MAFY IREO:
Tsy fahampian’ny famatsiana horonantsary X-Ray noho ny fisian’ny sy ny vidiny
Tsy fahampian’ny famatsiana akora simika X-Ray mampivelatra sy ny vidiny mifandraika amin’izany
Masinina mampivelatra tsy ampy
Fahasarotana hahazoana hevitra faharoa
Fitehirizana ny taratra X
Ratsy kalitao, taloha, tsy azo atokisana
Ao amin’ny Medical Aid International dia manampahaizana manokana amin’ny vahaolana klinika ho an’ny tontolo iainana ambany izahay, amin’ny fikajiana ireo fanamby manokana atolotray ny toerana tsirairay.
Digital X-Ray dia manova ny fizotran’ny diagnostika. X-ray dia raisina toy ny mahazatra, miaraka amin’ny takelaka nomerika amin’ny kasety (omena), tsy mila fanovana milina X-Ray. Raha vantany vao nalaina ny X-Ray dia apetraka ao anaty scanner ilay kasety ary 45 segondra manaraka ity dia eo amin’ny efijery ilay sary. Izy io dia jerena amin’ny fampiasana fonosana rindrambaiko feno miaraka amin’ny safidy feno misy. Anisan’izany ny fahaizana manatevin-daharana sary, mandrefy ny halavany sy ny zoro, ny zorony, ary ny fanovana tsy fitoviana. Ny rindrambaiko dia tena sariaka mpampiasa ary manana fahaiza-manao firaketana ny angona marary feno. Ny sary dia azo jerena eo noho eo amin’ny solosaina tambajotram-pifandraisana hafa ary ny mpampiasa hafa dia afaka miditra avy amin’ny toerana rehetra manerantany. Ny sary dia tsy nandany vola na inona na inona ary azo natonta ho an’ny mararin’ny marary.
Digital X-Ray dia mety ihany koa ho an’ny fitsaboana vaky intra sy ny mpandidy mahazo sary latsaky ny iray minitra taorian’ny fivoahana. Matetika dia tsy misy ny fanamafisana ny sary ka vahaolana tonga lafatra izany.
Ny rafitra MAI Digital X-Ray